Araka izany, miisa 64 izy ireo ka ireo 10 mahafeno fepetra ihany no ho dinihan' ilay komity manokana na Comité Ad-hoc. Marihana fa telo ihany ireo anarana alefa eny amin'ny fiadiadiana ny Repoblika.
TOAKA BY PASS
Nosamborina ny mpamily iray sy ny namany teo By-pass. Ny antony dia satria nisy nanondro ny polisy fa mitatitra toaka gasy avy any Toamasina ny fiara peugeot 306 izay nentin’izy ireo. Rehefa nosavaina tokoa dia nahitàna 260 litatra tao anatiny. Notazomina teny amin’ny biraon’ny polisy ary nanokafana fanadihadiana avy hatrany. Sao mba tokony efa ovaina amin’izay ny lalàna ary hatao manara-penitra ny toaka gasy mba azo hivarotana azy na havadika solika ?
SAHIRANA NY MIARAMILA
Sahirana ny miaramila mpampandry tany vao tafiditra tao amin’ny tobin’ny dahalo ao amin’ny tanàna antsoina hoe Andriry, ao Betroka. Tsy misy afa-tsy dahalo izay lehilahy rehetra ao anatin’io tanàna io raha araka ny vaovao azon’ny mpitandro ny filaminana. Misy olona ambony miaro ny tanàna ary hatrizay dia tsy tafiditra ao mihitsy ny miaramila izay mikasa ny hisambotra dahalo. Nisy basy kalachnikov efa sarona sahady.
FIDOROHANA RONGONY MAHERY VAIKA
Tovolahy dimy izay 19 taona ny salan-taonany no nosamborina tao Toamasina. Izany dia noho ny fidorohan’izy ireo rongony mahery vaika « héroïne ». Lafo ny vidin’ny entana ary lasa mangalatra sy mandroba izy ireo mba hahazoana vola hahafahana midoroka. Vao haingana avokoa no nanomboka io fanao io ireo tanora saingy efa latsa-paka sahady ankehitriny. Mbola misy maromaro izay naman’izy ireo no karohina ankehitriny.
PERMIS BIOMETRIQUE SY CARTE GRISE
Tapitra ny alatsinainy lasa teo ny fe-potoana izay nomen’ny minisiteran’ny atitany. Izany dia mahakasika ny famerenana mamoaka ny « permis biométrique » sy « carte grise » izay manara-dalàna amin’izay. Hatreto anefa dia tsy misy mihitsy ny resaka momba izany ary toa modiana fanina fotsiny. Toe-javatra iray izay afaka hitsaràna ny tompon’andraikim-panjakana iray ny tsy fanatontosany ny tena nomena toa izao, indrindra momba ireny « contrat-programme » ireny.
Mirongatra indray ireo tranokala izay feno sary vetaveta. Marobe ireo tanora ary tsy ampy taona izay hita ao ny sary mamoafadiny. Mila jeren’ny sampana cybercriminalité maika izany satria manimba olona, indrindra ireo tanora izay mbola handia fiainana kanefa efa miparitaka sahady ny sariny izay mety nalefa tany amin’ny olon-tiany fa tsy voatery sary hanaovana fivarotan-tena.
TSY FIRAHARAHIANA NY MARARY
Mitombo ny fitoriana dokotera noho ny tsy firaharahiana marary, indrindra ireo izay miasa eo anivon’ny sampana fameloman’aina. Ny faramparany teo dia ny fisian’ny olona izay notsaboina ary navelany irery tao amin’ny efitrano kanefa nanao krizy, ny havany anefa tsy navela hiambina. Efa maty 30 minitra tao ilay olona izay vao nisy nahita. Tezitra ny fianakaviana ary nitory ilay hopitaly lehibe eto an-drenivohitra sy ny dokotera mpiambina io alina io.
SERANAM-PIARAMANIDINA NOSY MAORISY
Manomboka mandreraka ny olon-tsotra, indrindra ny vehivavy malagasy ny fandalovana eo amin’ny seranam-piaramanidin’ny nosy Maorisy. Ny antony dia satria miteny mihitsy ireo mpitandro ny filaminana sasany fa na hivaro-tena na hanondrana zava-mahadomelina ny anton-dian’ireo vehivavy malagasy ao amin’io nosy io. Hatao henon’ireo vehivavy mihitsy izany ary ny fisavàna hatao koa dia indraindray tonga hatrany anatin’ny tako-kenatra mihitsy. Fanambaniana tanteraka.